Antaninarenina : « NAMIDIN’NY CUA NY TANY», HOY NY M2PATE -
AccueilRaharaham-pirenenaAntaninarenina : « NAMIDIN’NY CUA NY TANY», HOY NY M2PATE
Mazava fa misy ketrika sy ambadika ataon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) mikasika ilay tany etsy Antaninarenina nampitondraina ny anarana Florida. Raha ny vaovao, novidian’ny tompon’ny orinasa Rossini fantatra amin’ny anarana “Frank Le Grand” io tany io. Amin’izao fotoana, efa nofefen’ity mpividy sy voalaza fa nahazo ilay tany ity ilay toerana sy ny tany.
Raha ny marina anefa, zaridainam-panjakana saingy, tantanin’ny CUA io tany nofefen’ny tompon’ny Rossini io. Noho izay indrindra, nambaran’ny minisi-panjakana misahana ny fotodrafitrasan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny tany (M2PATE), Narson Rafidimanana, fa namidin’ny CUA tamin’io olona voatonona etsy ambony io ity fananam-bahoaka ity.
Tsy azo ekena velively anefa izany famarotana tanim-panjakana na/sy tanim-pokonolona izany. Noho izay indrindra, namoaka didy fanalàna ireo fefy sy fanatsaharana tsy misy hatak’andro izany ny teo anivon’ny minisitera.
Hatreto anefa, mbola miziriziry amin’ny heviny ny mpividy ny tany sy ny toerana. Etsy andaniny, tsy mbola nandray ny andraikitra sy ny fepetra tandrify azy ny CUA hatramin’ny ora sy fotoana nanoratanay.
Ankoatra izay, tsy mazava intsony ity raharaha ity, ankehitriny. Manana ny filazany indray ny CUA ary milaza fa tsy tompon’andraikitra amin’izany izy ireo. Miezaka miaro ny rambony tsy ho tapaka ve ny CUA miaraka amin’ny Ben’ny Tanàna, Lalao Ravalomanana, amin’izao fotoana izao ka nahatonga azy ireo nilaza fa tsy tamin’ny fitantanany no nisian’ity famarotana sy disadisa mahakasika ity toerana voafefin’olon-tsotra ity. Voalaza mantsy fa mitentina 5 tapitrisa Ar no nividian’ilay olon-tsotra ny tany tany amin’ny taona 1999. Izay indrindra no mahatonga azy ireo hiala tsy ho anisan’ny tompon’an,toka tamin’ny famarotana ny tany. Mipetraka anefa ny fanontaniana ankehitriny amin’ny fizirizirian’ilay nividy ny tany sy toerana Frank le Grand. Alalana avy aiza tokoa moa izany no nahafahan’ity farany namefy ny toerana sy nanombohany nanao ny asa fananganana fotodrafitra eo amin’ilay tany? Tsy misy afa-tsy ny CUA ihany anefa no afaka manome taratasy fahazoan-dalana amin’ny fanorenena sy famefena tany. Noho izany, mazava ankehitriny fa misy ambadika sy tsikombakomban’ny roa tonta, ny mpivisy sy ny CUA, ao anatin’ity raharaha ity. Noho izany tsy ho afa-miala fotsiny amin’izany ny kaominina fa tompon’antoka feno amin’ity raharaha famefena tany tetsy Antaninarenina ity.
M.N / N.I